editor — Fri, 10/11/2019 - 19:06
दैवी कृपा छिपेको छ अहा ! यो भद्र वायुमा
आकाशबाट जो चल्छ, चल्छ बादलबाट जो
हरिया धर्तीका फाँटबाट जो चल्छ मस्तले
गालामा सुम्सुम्याएर भित्री आनन्द दिन्छ यो
मुक्तिनाथ यात्राको स्मरण
editor — Fri, 10/11/2019 - 19:00
चादी हो कि टलटल गरि टल्कने चादनि यो
उढ्दै भाग्यो विहग मन यो हर्षले मात्तिएको
सिंगै मूर्ति छमछम गति निर्झरी नर्तकीले
छेकिन् बाटो थुनि मुटुभरी देखिने सादगिले ।।१।।
युएईमा साहित्यिक श्रष्टालाई सम्मान गरिने
editor — Fri, 10/11/2019 - 18:48
युएई/सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले एक कार्यक्रमका बीच दुई जना साहित्यकर्मीलाई सम्मान गर्ने भएको छ । कार्यक्रम युएईको आबुधाबीमा यही अक्टोबर १८ तारिखमा हुँदैछ ।
सम्मानित हुन लाग्नु भएका साहित्यकर्मी युएईमा रहनु भएका गजलकार टक गुरुङ र झापामा कार्यरत कवि एब म सञ्चारकर्मी मायामितु न्यौपाने हुनुहुन्छ । कार्यक्रममा भाग लिन न्यौपाने युएई आइसक्नुभएको छ ।
DBJirelravi — Wed, 10/09/2019 - 21:57
नपिएको शराबले, मतायो र म रोएँ
नगाँसेको प्रितिले, हरायो र म रोएँ
लुकीछिपी हेरेर, मुस्काइ दियौ तिमी
नबोलेको बातले, फसायो र म रोएँ
editor — Tue, 10/08/2019 - 09:37
एकही माँ मे बहुतो रूप सजल
असङ्ख्य हुनक गुणगान हे
काली दुर्गा चण्डी महागौरी
अपार हुनक अवतार हे
दाँत खट खट जीव लह लह
देखि काँपल भूत पिशाच हे
एक हाथ गद्दा दोसर कत्ता
राक्षसके कायल संहार हे
editor — Tue, 10/08/2019 - 09:36
editor — Tue, 10/08/2019 - 09:23
यसपालीको दशैंमा पनि
यो निधार रित्तो हुने भो
बुढी आमा जमरा उमार्दै
सन्तानको आगमनको आशमा
बाटो हेर्दै होलिन्,
बुढा बा, मक्किन लागेको टोपी
editor — Tue, 10/08/2019 - 09:12
जीवनभरिको आशीर्वाद लिएर
म टाढा आएको छु आमा
आफ्ना लालाबालालाई तिमीसामु
पठाइएको छु आमा ।
तिम्रा ती बुढेसकालका चाउरी परेका हातले
यो कानमा जमरा सिउरिन त कहाँ मन नभएको हो र
तर जिम्मेवारीले बालाईजस्तै मलाई लाहुर
पठाइएको छ आमा
editor — Sun, 10/06/2019 - 20:16
बिगतको पाना पल्टिन्छ
अनि यो युग बद्लिन्छ
बुद्ध टीका लगाउन आउँछ जब
तर्सिन्छ ऊ अनि अनायसै
harkapm — Sun, 10/06/2019 - 16:54
आज म एउटा मुक्तक, कहरमा लेख्दैछु
स्वदेशमा होइन प्रवासी, शहरमा लेख्दैछु
मेरो पनि सारै मनथियो दशैँमा टीका थाप्ने,
बिडम्बना टीका सपनाकै बहरमा लेख्दैछु!
एकदेव — Sun, 10/06/2019 - 16:06
लघुकथा कलश रचना प्रकृया विशेषांक
सबैभन्दा पहिला कुनै रचनाले म भित्र कहिले अनि कसरी जन्म लियो ? जतिबेला म यो विषयमा सोच्छु त्यसबेला आफ्नै शिशु रूप आमासँग न्यानो ओछ्यानमा आरामसँग सुतिरहेको पाउँछु अनि आमाले बाल्यकालमा सुनाउनुभएका कथाहरू दिमागमा घुम्न थाल्छन् । सात भाइहरूकी एकमात्र बहिनी जात्रा हेर्न जानका लागि आफ्ना सातैवटी भाउजूहरूसँग छुट्टाछुट्टै पछ्यौरा माग्छे । कसैले पनि उसलाई पछ्यौरा दिंदैनन् । धेरै रोईकराई गरेपछि बल्ल एउटी भाउजूले उसलाई पछ्यौरा दिन्छे । जात्रामा पिङ खेल्ने क्रममा एउटा कागले उसको पछ्यौरामा बिष्ट्याइदिन्छ ।
घण्टीको मूल्य (बाल लघुकथा)
editor — Sat, 10/05/2019 - 20:12
हरिप्रसाद एक किसानको छोरा थियो । प्रशस्त खेतीपाती भएकोले माटो मोलिलो बनाउनुपर्ने र दुध बिक्रीबाट आम्दानीको स्रोत बलियो बनाउने उद्देश्यले भैंसी पनि पालेको थियो । परिवारका अन्य सदस्यहरू खेतीपातीमा काम गर्थे भने हरिप्रसाद दिनहुँ बिहानैदेखि भैंसी चराउन बनमा जान्थ्यो ।
सबै भैंसीहरुको घाँटीमा एकै प्रकारको घण्टी बाँधिएका थिए । एउटा उन्नत जातको धेरै दूध दिने चिल्लो राम्रो भैंसीको घाँटीमा अरुकोभन्दा फरक महँगो घण्टी बाधिएको थियो ।
चारिटा मैथिली हाइकु - ३ (नभ मे उर्जा)
editor — Sat, 10/05/2019 - 11:31
नभ मे उर्जा
सुरुजक लाली सँ
धरती स्वर्ग ।।
धन्य प्रकृति ।